Ogaden News Agency (ONA) – Askar Turki Ah oo Lagu Laayay Dagaal Ka Dhacay Suuriya
Askar Turki Ah oo Lagu Laayay Dagaal Ka Dhacay Suuriya
Posted by ONA Admin	/ February 6, 2018
Ciidamada Turkiga oo wadey hawlgal ka dhan ah Jabhadda YPG ee Kurdiyiinta Suuriya ayaa u murogoonaya ciidamo badan oo hal mar looga dilay gudaha Siiriya, tan iyo markii Turkigu bilaabay hawlgalka ka dhanka ah YPG laba todobaad ka hor.
Maalintii Sabtida ayaa ugu yaraan sideed askari lagu dilay weerar ay ku soo qaadeen koox ka tirsan YPG. Sida lagu yidhi bayaan ka soo baxay ciidanka Turkiga, askarta la weeraray ayaa saarnaa Dabaabad ama Taangi.
Dagaalyahanno ka tirsan YPG ayaa jidka u galay Dabaabad ay leeyihiin ciidanka Turkiga oo marayay Sheekh Xaruz oo Waqooyi Bari Siriya katirsan, waxaana ay dileen shan askari. Saddexda askari oo kale ayaa lagu dilay weerar kale oo ka dhacay isla Waqooyi Bari Siriya maalintii Sabtida.
Turkiga ayaa wada hawlgal culus oo ay doonayaan in ay Waqooyiga Siriya uga sifeeyeen Jabhadda YPG oo taageerto ka hesha Maraykanka, ama ay sameeyaan aag ka caagan ciidamada jabhadaha. YPG Turkigu waxa uu u yaqaanaa in ay yihiin koox argagixiso ah oo xidhiidh la leh goonni goosatada Kurdida ah ee isla dalka Turkiga. Raysalkwasaraaha Turkiga Binali Yildirim ayaa sheegay in ay u aargudi doonaan askartoodi.